juillet 2021 · déliremadagascar
Natao hiaro ny zon’olombelona nefa tsy manaja ny lalàna. Hangataka eny amin’ny fitsarana mahefa ireo fiarahamonim-pirenena miahy ny zon’olombelona miisa 40 ny fampitsaharana ny fananganana ny birao vaovaon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon’olombelona (CNIDH). Continuer la lecture →
Manampy amin’ny fianarana ny teny anglisy. Chaînes 11 malaza eran-tany natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora no atolotry ny Startimes ho an’ny mpanjifa mandritra ny fotoanan’ny vakansy. Continuer la lecture →
Amin’ izao vaninandro izao dia ny hiaka faran’ ny teknolojia no isan’ ny mahasarika ny rehetra maneran – tany. Ny etoamintsika dia ao amin’ ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely , Soarano ary ao Bazar Be – Toamasina no anisan’ ny ahitana izany .« Ny entana rehetra ato aminay dia « premier choix » daholo. Ary natao mifanandrify hatrany amin’ ny filàna sy fahefam – bidin’ ny tsirairay » hoy ny tompon’ andraikitra. Maro karazany tokoa nyzavatra hita ao ao amin’ ity Tranombarotra lehibe iray ity. Continuer la lecture →
Socio-eco	 28 juillet 2021 R Nirina
Dans le cadre du projet d’aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est (PADARNE), un protocole de partenariat est mis en place entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics (MATP) et les 3 Communes concernées à savoir, la Commune Urbaine d’Antanananarivo, la Commune d’Ambohimangakely et la Commune d’Ankadikely Ilafy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 25 juillet 2021 R Nirina
Feno 10 taona nandraisana anjara tamin’ny fampandrosoana ara-tsosialy, ara-toekarena sy ara-koltoraly ny Orange Solidarité Madagascar. Reny mpiahy ny lanonana fankalazana ny faha-10 taonan’ny fikambanana i Rajoelina Mialy, vadin’ny Prezidan’ny Repoblika. Continuer la lecture →
Ahafahana manampy ireo olona lasibatry ny fandikan-dalàna. Amin’ny volana aogositra 2021 no hivoaka amin’ny fomba ofisialy ny boky mirakitra ny fanadihadiana lalina momba ireo karazana endri-paneriterena ny mponina any ambanivohitra. Continuer la lecture →
Socio-eco	 16 juillet 2021 R Nirina
ORANGE MADAGASCAR : Nanolo-tanana ny Autisme Fédération Madagascar
Manana andraikitra amin’ny fampitoviana zo amin’ny fampiasana ny nomerika ny orange Madagascar. Noho izany dia nisy ny fifanaovan-tsonia ho fiaraha-miasa eo amin’ny Orange Solidarité Madagascar sy ny Autisme Fédération Madagascar (Au.Fé.M) teny Akorondrano ny 13 Jolay 2021. Continuer la lecture →
« 39 % ny fahafahan’ny zaza mivelatra ihany no hananan’ny zaza Malagasy raha tokony ho 100 % », araka ny fanadihadiana natao teto Madagasikara, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny ONN (Ofisy nasionaly misahana ny fanjariantsakafo). Continuer la lecture →